အခါသင်ပျော်မွေ့ချင်အချို့အရည်အသွေးကောင်းအရွယ်ရောက်ဖျြောအွန်လိုင်း၊အဆန်းပုံစံ၏မီဒီယာကလူအမဖြစ်စေခြင်းငှါ၊စဉ်းစားနေကြတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ။ ဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စွာသင်တို့နှင့်အတူရိုးသားသော၊သမိုင်းၡမ်ားဂိမ်းများမအမှန်တကယ်အားလုံးကောင်းပါတယ်။ ဒါဟာခက်ခဲတဲ့ရှာတွေ့မှအကြောင်းအရာတစ်ခုခုသို့အညာဘက်ပွဲချင်းပြီးသင်ပြုသည့်အခါ၊ပိုပြီးမကြာခဏမထက်တော့ရေးသားပြီးအင်း–ဒါကမမည်သူမဆိုအတွက်ကောင်း၏။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ငါသည်သင်ပြောပြချင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းငယ်သာအာကာသအင်တာနက်ပေါ်မှာအများသောအားဖြင့်ဝင်များ၏အမည်သင်ျဗီဒီယိုဂိမ်းများ။, သိလိုရှေ့ဆက်အချိန်ရဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ရှာဖွေနေပါတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအလှန်အတွေ့အကြုံ၊အားလုံးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အများ၏စိတ်ကူးဖြင့်သင်တဲ့အခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာမယ်၊ငါတို့နိုင်ပေးကမ္ဘာလုံး၏အပြာဂိမ်းကစားသူတို့လိုအပ်ပါတယ်။ အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအဘို့အထွက်ရှိပါတယ်ကြောင်းအရာအမျိုးအစားများ၊ဒါပေမယ့်ငါတို့အဘို့အ–တာသွားနှင့်သင်ျ! ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ချစ်၏စိတ်ကူးလူတို့ခံရနိုင်မင်းမိသားစုဝင်များအတွက်လေ့ကျင့်။ ကပူ၊ဆောနှင့်အင်း–ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုက်နှင့်အတူအရာအားလုံးကိုအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားနေမယ့်။, ဒါကြောင့်စိတ်ထဲတွင်ထိုအတူ၊သင်သာကိုလေ့လာစူးစမ်းချင်တယ်သင်ျဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရရှိပါသည်ပူဇော်ဖို့? အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးယနေ့အချိန်တွင်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဂိမ်းကစားကမ္ဘာအနှံ့စေပြီးသူတို့သွား-မှအစက်အပြောက်များအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ္စည်းပါ!
ကိုပြသဖို့ပဲသင်မည်သို့အလေးအနက်ငါတို့သည်အနာဂတ်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဘယ်လိုယုံကြည်စိတ်ချကျနော်တို့နှင့်အတူ၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုကယ်နှုတ်ဖို့ရာတစ်ခုခုကိုအမှန်တကယ်ထူးခြား၊ကျနော်တို့အတွက်ပေးတာပေါ့ဖို့စွမ်းရည်ကိုနှစ်သက်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်ဆပ်ဖို့မလိုဘဲ။ ဤအတူသယောင်ထင်ရသည်တစ်ရူးစိတ်ကူး၊ဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့စစ်မှန်ကြောင်းထင်၊လက်ျာအဆင့်ရှေ့ဆက်ငါတို့အဘို့အသွားဖို့ပါဝင်ဖြင့်လူတိုင်းအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်–မသြင္းဘို့ထိုသူတို့။, ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့ကြီးပွားနိုင်အဖြစ်အပြီးကျွန်တော်တို့ဟာဖေါ်ပြကမ္ဘာ့အရာကိုကျနော်တို့အပေါ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရတယ်နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်။ ဤသည်သင်ျဂိမ္းကောင်းကင်ဘုံနှင့်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဖို့အတွက်လာ–ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲအတွက်အခွင့်ထူး–အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်ငါတို့သည်အကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့ပြီးပြီ၊သင်ရှိသည်ဖို့သွားကြသည်တစ်ဦးလုံးဝကြယ်၏အချိန်နှင့်တစ်ဝက်! ဒါကြောင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေဖို့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးမှကြွလာသောအခါမိသားစုညမ်းဂိမ်းအွန်လိုင်း:သင်သည်တတ်နိုင်အစဉ်အမြဲရေတွက်ပေါ်သင်ျဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်လိုတဲ့အခါရှုပ်များချွတ်။
ကျွန်တော်ရချင်သငျသညျအရေးယူအပေါ်အမြန်ဆုံးအဖြစ်၊အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်သင်ျဗီဒီယိုဂိမ်းများသည်လုံးဝအခမဲ့များအတွက်ဦးတည်ဖို့သင်လက်လှမ်းမီနှင့်လေးမြတ်တန်ဖိုးထား။ ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရန်အားလုံးဂိမ်းငါတို့သည်သင်တို့ကိုပူဇော်ခြင်းငှါအကနေတဆင့်–ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်မွေ့လျော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်၊အပြည့်အဝအတိုင်းအတာသင်ျဗီဒီယိုဂိမ်းများမှဖြောင့်သင့်ရဲ့တည်းဖြတ်ခြင်းများ၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီ။, ဒါဟာနှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီမှုယုံကြည်ကြောင်းပြောကြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ကယ်နှုတ်ဂိမ်းကစားပုံပုံမှ–သူတို့လိုချင်တာရနိုင်မှမိမိတို့လက်ကိုအပေါ်အကောင်းဆုံးအစဉ်အဆက်ဖို့ကြိုးစားလျှင်ရှုပ်ထွေးသူတို့ကိုပတ်ပတ်လည်၊အသင်ျပျော်သွားသည်ဆိတ်ကွယ်ရာလဲကျလျင်အမြန်သူတို့ကြိုက်ဖို့မသွားမယ့်နည်းနည်းအတွက်။ နေမယ်ဆိုရင်ရှုပ်ထွေးကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ရာက္ဇာကိုချဉ်းကပ်သည်ကြီး:အကြှနျုပျကိုသင်တို့အားပြောပြကြစို့အဖြစ်မကြာမီခင်ဗျားတက်လက်မှတ်ထိုးဒီမှာ၊သင်ဝန်တစ်ဂိမ်းအတွက်မျှသာစက္ကန့်နှင့်စတင်ရှိခြင်းသင်ျ။ မှန်–အဘယ်သူမျှမစောင့်ဆိုင်းများအတွက်ဒေါင်းလုပ်ဒါမှမဟုတ်တပ်ဆင်ခ။, ဤခေါင်းစဉ်ပြေးထဲကလတ်ဆတ်တဲ့အရာက္ဇာနှင့်သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မင်း၏အစ်မသို့မဟုတ် jerked အားဖြင့်ပယ်သင့်ရဲ့အမေ။ အသင်ျအရေးယူသည်တရားနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောလူအကျွန်တော်တို့ကိုလာပြောမယ့်ဒေါက်ကျော်ဦးခေါင်းနှင့်အတူမေတ္တာ၌အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးထုတ်လုပ်ရန်နိုင်။ သင့်ရဲ့ကြက်ဖြစ်သွားသည်မိုဃ်းတိမ်ပေါ်မှာကိုးနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါကြောင်းဤအမှန်တကယ်အကောင်းဆုံးမိသားစုဂိမ္းခရီးမည်သူမဆိုများအတွက်နှင့်အတူသင်ျစွဲလမ်း။ ကျနော်တို့လိမ့်မယ်ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းအရာကိုသင်အလိုရှိသော–အဘယ်သူမျှမမေးသောမေးခွန်းများ!
ဒါကြောင့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း:ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည်လုံးဝအခမဲ့အချာထင်စေသည်အများကြီးတစ်ငရဲ၏သဘောမျိုးများအတွက်မည်သည့်စားဖို့ရှိပါတယ်ထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းဒါကြောင့်သူတို့တွေ့မြင်နိုင်သည်အတိအကျအဘယ်သို့သောအကြောင်းကျနော်တို့အပေါ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရတယ်။ ကျနော်တို့ကြိုးစားပြောင်းလဲဖို့တတ်နိုင်သမျှလူများစွာလျှင်၊ဒါကြောင့်သင်အစားအတော်ပင်သောသူအသင်ျအရေးယူပြီးသင်ယူချင်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုနောက်အဆင့်မရှိခဲ့ဖူးပိုကောင်းတဲ့အချိန်–သို့မဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်–အတိအကျကိုပြုမည်။ ကျေးဇူးအများအများကြီးများအတွက်စာဖတ်ခြင်းအကြောင်းသင်အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့သင်ျဗီဒီယိုဂိမ်းများအဖြစ်အများကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရဖန်တီးပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ချစ်ခြင်း!